कोरियामा नेपाली कामदारको तलब प्रतिघण्टा १० हजार होला त ? | NewsKarobar
गृहपृष्ठ कोरियामा नेपाली कामदारको तलब प्रतिघण्टा १० हजार होला त ?
कोरियामा नेपाली कामदारको तलब प्रतिघण्टा १० हजार होला त ?
इन्छन् (दक्षिण कोरिया)
राष्ट्रपति मुन जे इन प्रशासनले सन् २०२० देखि लागु हुनेगरी न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा १० हजार वन बनाउने रणनीति लिएको थियो । राष्ट्रपति मुनले आफू राष्ट्रपतीय चुनावमा होमिँदा एक एजेण्डा यो पनि बनाएका थिए ।
दक्षिण कोरियामा कार्यरत मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरुले केहि वर्ष अगाडिदेखि नै न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा १० हजार वन बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छन् । आगामी वर्षका लागि यहीँ जुलाईमा न्यूनतम ज्यालाका विषयमा विषयमा मजदुर, सरकार र मालिकका प्रतिनिधिबीच बहस हुनेछ ।
तर, छलफलको १० औं संस्करण भने बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । मजदुरपक्षले आगामी वर्षका लागि प्रतिघण्टा १० हजार (मानवन) बनाउनुपर्ने बताइरहेका छन् भने रोजगारदाताहरुले अहिले दिइरहेको ८३५० वनबाट घटाएर ८ हजार बनाउनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् ।
जुलाई ९ को बैठक मजदुरपक्षले बहिस्कार गरेको छ । सरकारका ९, व्यवसायी ९ र मजदुरपक्षका ९ गरी २७ सदस्यले निर्धारण गरेको ज्याला अगष्ट ५ तारिकमा संसदबाट पास गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसरी १० औं पटकसम्म पनि आगामी वर्षका लागि ज्याला तय हुन नसक्दा के प्रतिघण्टा मानवन होला त ?
त्यस्तै, ज्याला वृद्धि गर्नुपर्ने, कार्यस्थान परिवर्तन श्रमिकले चाहेअनुसार गर्न पाउने, स्थानीय र आप्रवासी मजदुरलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेलगायतका माग राखी जुलाई आगामी आइतबार फेन्तेक रेल स्टेशनमा आप्रवासी मजदुर संगठन– एमटियुले विरोध र्याली निकाल्ने तयारी गरिरहेको अध्यक्ष उदय राइले बताए ।
मजदुर प्रतिनिधिहरुले आर्थिक तथा मूल्यवृद्धि र श्रम बजारको आय असमान रहेको जनाउँदै आधारभूत ज्यालामा वृद्धि गरिनुपर्ने अडान लिएका छन् । उनीहरुका अनुसार ज्याला प्रतिघण्टा मानवन भएमा न्यून आय भएका करिब २ करोड भन्दाबढी श्रमिकलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ । गतवर्ष न्यूनतम ज्याला वृद्धिसँगै अधिकांश कम्पनी सञ्चालकहरुले आप्रवाशी कामदारलाई दिँदै आएको सेवा सुविधामा भारी कटौती गरेका थिए । अतिरिक्त काम गर्ने समयमा पनि कमी आएको छ ।
खाना र बस्न निःशुल्क दिँदै आइरहेका कम्पनीहरुले तलबाट पैसा काट्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएका थिए । बोनस दिने कम्पनीहरुले पनि बोनसमा कतौटी गरेको नेपाली कामदारहरुले गुनासो गरेका छन् । कोरिया सरकारले पछिल्लो सयम आप्रवासी कामदारको खानाबस्न र अन्य खर्च गरी तलबको २० प्रतिशतसम्म काट्न पाउने नियमसँगै आप्रवासी कामदार मर्कामा परेका छन् ।
खानबस्न, बोनस र अतिरिक्त समय काम कटौती गर्दा र खानबस्नको महँगीसँगै कोरियामा कार्यरत आप्रवाशी कामदारले मुस्कीलले प्रतिमहिना १ लाखदेखि १ लाख ५० हजार नेपाली रुपैयाँसम्म बचत गर्न सक्छन् ।
मजदुर संगठनहरुले कोरियन श्रम बजारको आय असमानतालाई निरुत्साहित गर्न सामान्य मजदुरको न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिने बताएका छन् । देशको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि लगायतका विभिन्न सुचकांकको आधारमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्न माग गरिएको हो ।
यो वर्षको पारिश्रमिक सातामा ४० घण्टा (महिनामा २०९ घण्टा) को न्यूनतम मासिक १७ लाख ४५ हजार १५० वन छ । जसको नेपाली रुपैयाँ १ लाख ७० हजारजति हुन आउँछ । ( कोरियन वन १ सयको नेपाली १० रुपैयाँ १० पैसा हुन्छ) अघिल्लो वर्ष सरकारले १६.४ प्रतिशतसम्म तलब बढाएको थियो ।
कोरियाले सन् १९८८ देखि ज्याला निर्धारण समितिमार्फत प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दै आएको छ । सो समयको न्यूनतम ज्याला ४ सय ६२ वन थियो । सरकारले सन् २००९ मा ६.१, २०१० मा २.७५, २०११ मा ५.१, २०१२ मा ६.०, २०१३ मा ६.१ २०१४ मा ७.२, २०१५ मा ७.१, २०१६ मा ८.१, २०१७ मा ७.३, २०१८ मा १६.४ र २०१९ का लागि १०.९ प्रतिशतले ज्याला बढाएको थियो ।
प्रकाशित समय १०:५८ बजे
पछिल्लाे - बादी समुदायलाई व्यावसायिक तालिम
अघिल्लाे - प्रदूषित पानीले झाडावान्ताका बिरामी बढे